Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay in aysan aqbali doonnin doorasho dadban – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir-guddoominayay kulankii 16-aad ee Kalfadhiga 7-aad, kaas oo maanta looga hadlayay wax ka badalka Sharciga Xibsiyada Siyaasadda.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka C/weli Sheekh Ibraahim Muudeey, ayaa sheegay in kulanka maanta uu ku furmay 142 Xildhibaan.
Guddiga arrimaha gudaha, maamulada gobolada iyo amniga ee golaha shacabka ayaa akhrinta labaad mariyay wax ka bedelka sharciga axsaabta dalka, kaas oo muhiim u ah doorashooyinka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in aysan aqbali doonnin doorasho dadban, iyadoo Baarlamaanka uu ansixiyay sharcigii doorashooyinka.
Guddoomiye Mursal, ayaa sheegay in nooca doorasho ee dalka Soomaaliya uu go’aan ka kaari karo Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Hoggaamiyayaasha maamul-gobolleedyada oo shir ugu soo dhammaaday magaalada Dhuusamareeb, ayaa isku raacay in doorasho Qof iyo Cod ah aysan ka dhici karin dalka Soomaaliya, iyadoo aan la sameynin muddo kororsi.